Posted by my blog at 7:28 AM0comments
ူလုပ်ကြံမူများကြားက ဗုဒ္ဓဘာသာ (နိဂုံး)
(နည်းနည်းတော့ ရှည်လျားတယ်၊ အင်တာနက်က အမြဲသုံးလို့ မလွယ်ဘူး။ လွယ်တော့တော့လဲ လွယ်ပါတယ်လေ။ အီးမေးလ်ပဲ သုံးလို့ရတယ်။ ပို့စ်တင်ဖို့က မလွယ်ဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတည်း အရှည်ကြီးကို တင်လိုက်တယ်။ ရန်ကုန်သွားတောလားကလဲ တန်းလန်း၊ ရဟန်းတော်များရဲ့ အမွေအနှစ်ကလဲ တန်းလန်း။ တန်းလန်းတွေက များနေတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ကလဲ ခရီးသွားရင်း တန်းလန်းဆိုတော့......အစစ ကြည့်လုပ်နေရတယ်။
ရေးထားတဲ့သူက တော်တော်ကောင်းတယ်။ တစ်နေ့က တက္ကသိုလ်ထဲရောက်သွားတော့ ဒီဆောင်းပါးကို စာအုပ်ငယ်လေးလုပ်ပြီး လိုက်ဖြန့်နေတယ်တဲ့။ ကျောင်းသားတွေကို အခမဲ့ ဝေပေးနေတယ်။ ပြန်ပွားအောင်လုပ်နေတာတွေ့တော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့လဲ မသိဖူးပါဘူး။ ထားပါတော့၊ ခင်ဗျားတို့လဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်အုံးပေါ့ဗျာ)
ဒီမှာ လွဲမှားနေတဲ့ အရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့၊ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အမည်ခံတွေ့ဆုံးစည်းဝေးပြောဆိုမှုတွေကို မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဟုတ်လှပြီဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ ထေရ၀ါဒနဲ့မဟာယာန၊ မဟာယာနနဲ့တိဗက်…….အဲဒီလို အဲဒီလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံဖို့ကျတော့ အတော်ကို ခေါင်းမာနေကြဆဲပါ။
ဒီအဓိက ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းကြီးသုံးခုကြားမှာ ထိရောက်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ တွေ့ဆုံမှု နည်းနည်းလေးမှ မရှိတာဟာ အတော့်ကို ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းပါတယ်။ စီးပွားရေးအရ အင်အားနည်းတဲ့ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက ကျောင်းတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေဟာ အနောက်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ သူတို့နိုင်ငံဖွားဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆီးပေးဖို့ အတော်လေး ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ စီးပွားရေးအရ အင်အားကောင်းတဲ့ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတွေက ကျောင်းတွေနဲ့ရဟန်းတွေဟာလည်း ချမ်းသာတဲ့အနောက်နိုင်ငံတစ်လွှား သူတို့ရဲ့ သြဇာအာဏာကို ဖြန့်ကျက်ဖို့ ရုန်းကန်နေကြရပြန်တယ်။ ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ အဲဒီမှာ ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျ ခံနေလင့်ကစား တိဗက်ရဟန်းတော်တွေကတော့ တိဗက်ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာက အာရုံကျစေဖို့ ကျော်ကြားလူသိများအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေကြရပြန်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေ အချိုးအကွေ့တွေအားလုံးက အမေ့လျော့ခံ၊ မသိကျိုးကျွန်အပြုခံထားရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သန်းပေါင်းများစွာကို သိသိသာသာပဲ ချန်ထားရစ်စေခဲ့ပါတယ်။ မထင်ရှားတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဒေသတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပညာရေး၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ လူမှုရေးတိုက်ပွဲတွေမှာ အနောက်ကမ္ဘာမှာထက် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အလူးအလဲ လိုအပ်နေကြပါတယ်။
အနောက်ကမ္ဘာမှာလည်း အလားအလာကောင်းတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တွေကို တစ်ယောက်ထက်မနည်း လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။
အနောက်ကမ္ဘာက လူတွေဟာ ပညာတတ်တယ်၊ ကြွယ်ဝတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို တရားဟောတာကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ အာရှသားတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရှအရင်းအမြစ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆီးပေးဖို့ ကြိုးစားဆဲအခါမှာလည်း အထက်ပါ မထင်မရှား ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်မြေတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို လုံးဝ လုံးဝ မေ့မထားသင့်ကြပါဘူး။
သူတို့တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ အခုထိလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖြစ် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ထိန်းထားကြဆဲပါ။ ဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို သူတို့ကို မျှဝေပေးရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆီက ပံ့ပိုးမှုတွေကို မရရှိကြပါဘူး။
ကဲ …အခြေအနေတွေက အဲဒီလို ဖြစ်နေခဲ့ရင်…
ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာက ကျွန်ုပ်တို့ ကျဉ်ဖယ်ထားတဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေနဲ့ အတူနေဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့၊ သူတို့ကို လက်တွေ့ကျကျ ကူညီနေတဲ့၊ ပံ့ပိုးပေးဖို့ အဆင်သင့်သွားရောက်နေကြတဲ့ သူတွေ (ခရစ်ယာန်တွေ)ကို ကျွန်ုပ်တို့က ဆန့်ကျင်ပြီး ကဖျက်ကယက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအရ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မှန်ကန်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်နိုင်တော့မလဲ။
ကဲ… အဲဒီလို ကူညီနေမှုကို ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရပ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြောကြားဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံထားတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ ဘယ်တရားဓမ္မကရော အဲဒီလို ပြောကြားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ (အဲဒီလို သူတို့ ကူညီနေကြတာဟာ ဗုဒ္ဓတရားတော်အရ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။)
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်ရှားနေတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမေ့လျော့ခံ၊ ကျဉ်ဖယ်ခံထားရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက် ကူညီနေတာတွေကို မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့တွေထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာကို အရူးအမူး ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူအများစုတောင်မှ လက်ခံကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ မွေးရာပါကောင်းမြတ်ခြင်းတရားများ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ငြင်းပယ်လို့ မရတဲ့၊ ဘေးချိတ်ထားလို့ မရတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကပဲ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ကူညီဖို့ စွမ်းအားချို့တဲ့ခြင်းနဲ့ စိတ်အားမထက်သန်ခြင်းကို မေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေဟာ ``ယေရှုကို ယုံကြည်လိုက်ပါ၊ သူဟာ မင်းတို့နဲ့အတူ အမြဲရှိနေပါလိမ့်မယ် (believe in Jesus, he will be always with you)´´ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ ကြွေးကြော်သံဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ အရမ်းကို အောင်မြင်နေကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ``ကျွန်ုပ်တို့ဟာ သင်တို့ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေများ ဖြစ်ပါတယ်´´ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတစ်ခုကို လေ့လာသင်ယူပြီး တက်ကြွတဲ့ လူမှုရေးအကူအညီတွေကို လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ပြပြီး သက်သေပြနိုင်ရင် အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအမြင်ရှိတဲ့၊ တိုးတက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ လူသားဝါဒတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် လူသားတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မရှိသေးပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယခုအခါ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမေ့လျော့ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ စိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို တုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်ပေးဖို့ သိသိသာသာ ပျက်ကွက်နေကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာကို ဂိုဏ်းစွဲ၊ ဂဏစွဲနဲ့ အဖွဲ့အစည်းကွဲတွေ၊ (ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့တန်းတင် ငါတကောကော ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုတွေ)က အများကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့လိုက်နာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာပုံစံကို မလိုက်နာတဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ စိတ်ဆန္ဒမရှိကြဘူး။ (ထေရ၀ါဒက မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် မကူညီချင်ဘူး…စသည်)။ ကူညီဖို့ တွန့်ဆုတ်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ (ခရစ်ယာန်စည်းရုံးရေးသမား)တွေဟာ သင့်လျော်တဲ့ အကူအညီပေးဖို့ မစဉ်းစားမီ အမျိုးမျိုးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းကွဲတွေကြားမှာ သွားရောက်နေတဲ့ ခရစ်ယာန်စည်းရုံးရေးသမားက တောင်းဆိုမှုများ ရှိပုံရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကိုရီးယားနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့မှာရှိတဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်တွေမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အမေ့လျော့ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမျိုးစုတွေဆီကို သွားပြီး အကူအညီတွေ ပေးဖို့ ဆန္ဒရှိကြပုံ မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းက ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ထို့အတူပဲ စွမ်းနိုင်တဲ့ ထိုင်း၊ သီရီလင်္ကာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာလည်း ဟိမလေယျ(ဟိမ၀န္တာ)ဒေသမှာရှိတဲ့ လူနည်းစုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးစုတွေကို သွားရောက်ကူညီဖို့ ဆန္ဒမရှိကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာ တိဗက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒါဟာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက သူ့ရဲ့နောက်ပါတွေကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အခြေအနေ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင် နှစ်သက်တဲ့အနေအထားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အမျိုးမျိုးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းကွဲတွေအကြားမှာ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် တုံ့ပြန်ချက်တွေကို တားဆီးထားကြခြင်းရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ခရစ်ဆိုတဲ့အနံ့မရခင်အချိန်ကတည်းက ထောင်ပေါင်းများစွာသော သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ခေါင်းဆောင်တစ်ဆူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အမှန်တရားကို လက်ခံလိုက်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ နောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဘာမှ ပြောင်းလဲမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကို ဟန်မဆောင်ဘဲ လက်ခံလိုက်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ထဲမှာ ကွဲပြားနေတဲ့ အယူအဆတစ်ခုက ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ပညာမတတ်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ထက် ကမ္ဘာမှာ ပညာအတတ်ဆုံး၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝဆုံးနဲ့ အသိဉာဏ်ပညာအပြည့်စုံဆုံ ပဏ္ဍိတ်ကြီးတွေကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ ခုံမင်နေကြခြင်းပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ လူသားတွေရဲ့ အသိဉာဏ်နဲ့ အတတ်ပညာတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချနေကြတယ်။ ဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာစည်းရုံးရေးသမားတွေရဲ့ အထွဋ်အမြတ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီအလားအလာဟာ အခြားအကျိုးမဲ့ကိစ္စတွေဆီကို ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြားအကျိုးမဲ့ကိစ္စဆိုတာက တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဆင်းရဲနုံချာလှတဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ စာပေမတတ်မြောက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဆုံးရှုံးသွားခြင်းပါပဲ။ ဒီအခြေအနေတွေက ကျွန်ုပ်တို့ အများကြီး ချီးကျူးထောမနာပြုနေတဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် မဇ္ဈိမပဋိပဒါရဲ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုတွေကို တောင်းဆိုနေခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာက ကြီးမားခိုင်ခံ့စွာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအဖွဲ့တွေဟာ သူတို့ ပါးစပ်ကပြောထားတဲ့ တာဝန်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကို ပျက်ကွက်နေကြပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့တွေအတွင်းမှာကိုပဲ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ လွဲမှားသောအပြုအမူများနဲ့ အကျင့်စာရိတ္တဖောက်ပြားမှုတွေရဲ့ သိက္ခာစောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေကို အဲဒီအရာတွေက မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။
ခေတ်သစ်စိန်ခေါ်မှုတွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်အောင် သံဃာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ အတွင်းကျကျ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ အသိဉာဏ်ပညာလည်းမြင့်မား၊ ပညာလည်းတတ်၊ ကြိုးစားမှုလည်းရှိ၊ အလားအလာလည်းကောင်းတဲ့ ရဟန်းငယ်တွေ လူထွက်နှုန်းမြင့်မားလာနေတာဟာလည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် တကယ့် ခေါင်းခဲစရာကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဆန္ဒလေးများ ရှိခဲ့ရင်….
တကယ့်ကို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေ ကင်းနေခဲ့ရင်…..
``သတ္တ၀ါအများ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်´´ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ကိုယ်တော်တိုင် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ကြွေးကြော်သံဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားခဲ့ရင်….
ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်နိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
ကဲ…ဒီလိုဆိုရင် ၂၃၈-ခုသော ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးစုတွေဟာ ခရစ်ယာန်စည်းရုံးရေးသမားတွေရဲ့ သားကောင်အဖြစ် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုကျရောက်သွားနိုင်တော့မလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့လို အသိပညာကြွယ်ဝတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုများ ရှိသလား။ ဆင်းရဲသားတွေကို လက်ပိုက်ကြည့်နေပြီး အကူအညီပေးနေတဲ့ ခရစ်ယာန်စည်းရုံးရေးသမားတွေကို ``မကောင်းဆိုးဝါးများ´´လို့ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ရေရွတ်နေသင့်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်ကျပါပြီ။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့ အချိန်ကျပါပြီ။
``သတ္တလောကကောင်းကျိုးအတွက် လှည့်လည်တရားဟောကြ၊ အများကောင်းကျိုးအတွက် လှည့်လည်တရားဟောကြ၊ သတ္တလောက အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက် လှည့်လည်တရားဟောကြ´´ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမှုကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် အမေ့လျော့ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ တင်ရှိနေသော အကြွေးတွေကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
အဲဒါတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ပျက်ကွက်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ``မညီညွတ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ပျင်းရိထုံထိုင်းသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်နေသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ´´ရယ်လို့ အပြစ်တင်မှုတွေသာ ကျွန်ုပ်တို့ဆီ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ။
လုပ်ကြံမူကြားက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပို့စ်အားလုံးကို http://attalwinpyin.blogspot.com/ ဘလောဂ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by my blog at 4:57 AM0comments
လုပ်ကြံမူများက ဗုဒ္ဓဘာသာ (၂)
Posted by my blog at 4:56 AM0comments
ဘိက္ခု ကေ တန်ချန်ဂျ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာချန်နယ်လ်၊ ဇူလိုင် ၁၇
ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့ ကြိုးစားမှုအနေနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကတော့ ဟက်ဝေး ပေါလ်ဆိုသူ ရေးတဲ့ ``ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာမှ လူများ´´ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါပဲ။ ``ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးလမ်းညွှန်စာအုပ်´´လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
မနုဿဗေဒအားဖြင့်ဆိုရလျှင် ဒီစာအုပ်ဟာ ပြောင်မြောက်တဲ့ သုတေသနပြုမှုတွေနဲ့ အလွန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဝေးလံလှတဲ့ အရပ်ဒေသက ၂၃၈-မျိုးသော လူမျိုးစုတွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာရဲ့ မြေပုံလမ်းညွှန်တွေ ပါဝင်အောင် ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အကြောင်းအရာအချို့တင်ပြချက်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပေမယ့် လုပ်ဖို့ပျင်းရိနေတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ဒီစာအုပ်ဟာ အမှားအယွင်းမရှိဘဲ စွန့်စွန့်စားစား ထုတ်ဝေပြီးစီးသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီစာအုပ်မှာ ကွယ်ဝှက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပါနေတယ်။ ဒီစာအုပ်က တရားဟောစည်းရုံးရန် စိတ်ဝင်စားပြီး စိတ်အားထက်သန်လှသော ခရစ်ယာန်စည်းရုံးရေးသမားတွေအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ရမယ့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ အထောက်အကူ ပြုနေတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ကလိမ်ကကျစ်နည်းတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ တိုက်ပွဲဝင် အစီအစဉ်တစ်ခု သို့မဟုတ် တိကျခိုင်မာတဲ့ လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာတတ်၊ ချမ်းသာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်တော့ တက်ကြွတဲ့ တရားဟောဆရာ၊ စာရေးဆရာကို ကျေးဇူးတင်စရာ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတင်ပြထားတဲ့ ၂၃၈-ခုသော လူမျိုးစုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အများစုက မသိကြသေးလို့ပါပဲ။
မှန်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းအများစုဟာ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို မသိကြသလို ကြာမြင့်စွာကတည်းက မေ့လျော့ထားကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ ပေါတီးပေါ့ဆနေတတ်ဆုံး လူမျိုးတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ခရစ်ယာန်စည်းရုံးရေးသမားတွေဟာ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် သာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ ၀ိညာဏ်ကို ထိတွေ့ဖို့၊ ကောင်းကင်ဘုံသခင်၊ ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့ သနားကရုဏာနဲ့ ကယ်တင်မှုရအောင် အများစုကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးကြလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်ုပ်ဟာ ဒီစာအုပ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဆန့်ကျင်ရေးစာအုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အပြစ်တင်ဝေဖန်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ လောဘအားကြီးတဲ့ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာသာသနာပြုအဖွဲ့ကိုလဲ အဲဒီလို တံဆိပ်တပ်ပြီး သံယောင်လိုက်စွပ်စွဲဖို့လဲ ရည်ရွယ်ချက် မရှိပါဘူး။ ကျွန်ုပ်ရည်ရွယ်တာက ပညာတတ်ပြီး ဥစ္စာကြွယ်ဝတဲ့ ယဉ်ကျေးကမ္ဘာမှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို တိုက်တွန်းချင်တာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာကို မတရားဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းနေမှုများကို လိမ္မာပါးနပ်လှတဲ့ အဖြေတစ်ခုခု ရှာဖွေသင့်တယ်ဆိုတာကို နားလည်သွားစေချင်တာပါ။
ဒီလို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ယုတ္တိရှိရှိ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဘယ်လို ဝေဖန်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ ဘာသာကူးပြောင်းမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ဘယ်လောက်များများ ပြဓာန်းဖို့ လိုအပ်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလဲ ဦးတည်ချက် ထားမနေပါဘူး။ ကျွန်ုပ်အဓိက ရည်ရွယ်တာက ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာကိုပဲ ရိုးသားပြီး ပန်းတိုင်ရှိတဲ့ ပြန်လည်စစ်ကြောရေးတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာများအနေနဲ့ ``ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကရုဏာတရား၊ အခြေအနေအရပ်ရပ်အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း၊ သည်းခံခြင်းတရားနဲ့ အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်နက်တွေကို တပ်ဆင်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၅၅၀-တိုင်တိုင် အသက်ရှင်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ဘာသာတရားတရားတစ်ခု ဖြစ်တယ်´´လို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာမြေအဖြစ်ကနေ ကျဆုံးသွားခဲ့တာကိုတောင်မှ ကျွန်တော်တို့ မေ့ဖျောက်ထားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အထိ သဘောထားကြီးတဲ့ ဘာသာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကို မွတ်စလင်ကျူးကျော်သူတွေ လက်ထဲ ထိုးအပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ နီပေါလ်တို့ကိုတော့ ဟိန္ဒူတွေရဲ့လက်အောက်မှာ ကျရှုံးခဲ့ရပြီးပါပြီ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရဲ့ ဝေးလံတဲ့ အနောက်ဘက်ပိုင်းဒေသတွေကိုလဲ ညှိနှိုင်းလို့ မရနိုင်တတ်တဲ့ မွတ်စလင်တွေလက်အောက် အရှုံးပေးခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ဒီလို ဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားတွေ ကြုံခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ နောက်ထပ် ဘယ်လောက်များများ ထပ်မံဆုံးရှုံးဖို့ စောင့်နေရတော့မလဲ။ ဒီထက်ပိုပြီး အဆုံးရှုံးခံဖို့ မျှော်လင့်နေကြတာလား။ ဒီမေးခွန်းဟာ တိုးတက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြေဖို့လိုအပ်နေတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို သမိုင်းဝင် အကြမ်းဖက်မွတ်စလင်ကျူးကျော်သူတွေရဲ့ လက်အောက်ကနေ အသက်ဆက်ခဲ့ရပေမယ့် ဒီမထင်ရှားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်မြေတွေဟာ ခရစ်ယာန်စည်းရုံးရေးသမားတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဆန်ဆန် စည်းရုံးမှုတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ အနေအထားတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အဲဒီလို အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျစရာ အရှိတရားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
သမိုင်းကြောင်းနဲ့ချီပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ အင်အားဟာ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်မှာ အခြေစိုက်ပါတယ်။ ထေရ၀ါဒပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မဟာယာနပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိဗတ်တန်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာမဆို သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၅၀ တစ်လျှောက်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အဓိကကြောရိုးအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အောင်မြင်မှုကို သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အင်အားနဲ့ မကြာခဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အစဉ်အလာအားဖြင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာ ရဟန်းတော်တွေ၊ ဘိက္ခုနီတွေနဲ့ သီလရှင်များ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်အထိလဲ စောင့်ရှောက်နေကြဆဲပါပဲ။ သဘာဝအကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအတွက် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကိုပဲ မှီခိုဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်။
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲ အဲဒီမှီခိုအားထားမှုတွေဟာ မှုန့်မှုန့်ညက်ညက်ပျက်စီးနေတဲ့ သွတ်ချာပါဒလိုက်မှုတွေကိုပဲ သယ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမှာ သူတို့ရဲ့ စစ်မှန်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ၊ အကျင့်စာရိတ္တစံနှုန်းလို စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းတွေ လျော့ပါးလာတဲ့အခါမျိုးမှာ၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာနဲ့ ပညာတွေ အားနည်းလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တာပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓသံဃာ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဘာသာကူးပြောင်းသူတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့၊ နောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ဆက်ဆံမှုမျိုးတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အချို့ရဟန်းတော်တွေဟာ သူတို့ကောင်းစားရေး၊ သူတို့တိုးတက်ကြီးပွားရေးအတွက် သူတို့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေကို ဖြည့်ဆီးပြီး ရိုက်စားတွေလုပ်နေတာနဲ့ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေကြပါတယ်။ အချို့ရဟန်းတွေ ခမျာတော့ ခေတ်ပေါ်စိန်ခေါ်မှုတွေကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှု မရှိဖြစ်နေရပါတယ်။ အဲဒီ အချို့ရဟန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ၀န်းကျင်လေးအတွင်းမှာပဲ အာဏာတွေ၊ အဆင့်အတန်းတွေ တိုးတက်ဖို့ ဖိုက်တင်ချနေကြပါတယ်။
အဲဒီလို မသတီစရာ အပြုအမှုတွေဟာ ကြီးမားတဲ့ ဟာကွက်ကြီးတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာစက်ဝိုင်းအတွင်းမှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှု၊ သစ်လွင်တဲ့ လူမှုရေးခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ တိုးတက်မှုအလားအလာတွေကို မျက်ကွယ်ပြုမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်စည်းရုံးရေးသမားတွေက သံဃာနဲ့ဒါယကာဒါယိကာမများရဲ့ လစ်ဟာနေတဲ့ ဒီကွက်လပ်ကြီးကို အလျင်အမြန်ပဲ ဖြည့်ဆီးပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက သံဃာတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ အစိုးရပိုင်ဆိုင်မှုထက် ကောင်းကောင်းကြီး ကျော်လွန်သွားနိုင်စရာရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။ မြောက်မြားလှစွာသော အလှူကြီးတွေက အချမ်းသာဆုံး ဆရာတော်တွေကို မွေးထုတ်ပေးပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းမှာ တစ်ခါမှ မရှိဖူးသေးတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတွေ မွေးထုတ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လို မထင်မရှား ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုတော့ `ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်၊ ကိုယ့်အားကိုယ် ကိုးကြ´ဆိုပြီး ထားရစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဥပေက္ခာတရားတွေ ထွန်းကားပြီး မေ့ထားလိုက်ကြပါတယ်။
Posted by my blog at 4:55 AM0comments
အမေရိကန် Seattle က နာမည်ကြီး ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာ လူအများ လေးစားကြည်ညိုတဲ့ Dell Taylorဆိုတဲ့ ဖာသာတစ်ဦးရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ ဘုရားကျောင်းက ကျောင်းသားတွေကို ဖာသာက ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြခဲ့တယ်။
ပုံပြင်က တစ်ခုသောဆောင်းရာသီမှာ မုဆိုးတစ်ဦးက အမဲလိုက်ခွေးနဲ့ တောလိုက်ထွက်ခဲ့တယ်။ တောအုပ်တစ်နေရာမှာ ယုန်တစ်ကောင်ကိုတွေ့တာနဲ့ မုဆိုးက သေနတ်နဲ့ပစ်လိုက်တာ ပေါင်ကိုမှန်သွားပေမယ့် ယုန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ အမဲလိုက်ခွေးက ဒဏ်ရာရတဲ့ယုန်ကို လိုက်ခဲ့ပေမယ့် မမိခဲ့ဘူး။ ဒါကိုမုဆိုးက ခွေးကို အသုံးမကျတဲ့ခွေး၊ ဒဏ်ရာရတဲ့ ယုန်ကိုတောင် အမီမလိုက်နိုင်တဲ့ခွေးဆိုပြီး အပြစ်တင်ခဲ့တယ်။
"ခွေးက တတ်နိုင်သလောက် ပြေးတယ်။ ကျွန်တော်က အစွမ်းကုန်အားသုံးပြီး ပြေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကို သူမမိခဲ့လို့ အဆူအဆဲပဲ ခံရမယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်သာ အားကုန်မပြေးခဲ့ရင် အသက်တောင် ရှင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး"
Matthew Bible ကျမ်းစာရဲ့ အခန်း ၅ ကနေ အခန်း ၇ထိက စာလုံးပေါင်း သောင်းဂဏန်းထိရှိပြီး ရွတ်ဆိုရတာလည်း အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ ကျမ်းစာတွေကို အလွတ်ရဖို့ဆိုတာ အလွန်ခက်ခဲပေမယ့် ငွေကုန်ကြေးကျမလိုဘဲ တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ ညစာစားပွဲကို လူတိုင်းတက်ရောက်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတော်တော်များများ နောက်ဆုတ် လက်လွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရက်မကြာခင်မှာ (၁၁)နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ သင်တန်းသားတစ်ဦးက ဖာသာရှေ့မှာ ရင်ကော့ပြီး ကျမ်းစာအားလုံးကို တစ်လုံးမကျန် အမှားအယွင်းမရှိ အလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ အရွယ်ရောက်သူတောင် အလွတ်ဆိုဖို့ ခက်ခဲတဲ့စာကို ကလေးငယ်တစ်ယောက် ဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖာသာအရမ်း အံ့သြခဲ့မိတယ်။ လူငယ်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ ဦးနှောက်ကို ချီးကျူးမိတဲ့အပြင် ကလေးငယ်ကို ဖာသာ တအံ့တသြမေးခဲ့တယ်။
နောင်(၁၆)နှစ်မှာ အဲဒီကလေးငယ်ဟာ ကမ္ဘာကျော် Softwareကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကလေးငယ်က Bill Gates ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်၊ လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအား(Potential)တွေ ရှိကြတယ်။ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ သာမန်လူတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်၊ လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကို ၂ ကနေ ၈ အထိပဲ အသုံးပြုကြတယ်။ အက်ဒီဆင်လို သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးတောင် ၁၂ထိပဲ အသုံးပြုခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ဦးရဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်က ၅ဝထိအသုံးပြုခဲ့ရင် အဲဒီလူဟာ ဖတ်စာအုပ်အအုပ်(၄ဝဝ)ကို အလွတ်ဆိုနိုင်သလို တက္ကသိုလ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘာသာစကား (၂ဝ)မျိုးလောက် တတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်(၉ဝ)က အိပ်မောကျနေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ သူတစ်ပါးထက် ထူးချွန်ချင်တယ်၊ ဖောက်ထွက်ချင်တယ်၊ ထီထွင်ချင်တယ်ဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက်နဲ့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။
မူရင်း --- 尽力而为还不够
Posted by my blog at 2:06 AM0comments
Great Expectation မှ ကူးယူပါသည်။
တူညီတဲ့ဘဝမှာ မတူတဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့ အရာတစ်ခုကို ကြည့်တဲ့အကြည့်နှစ်ခုက တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကောင်းမြင်စိတ်၊ ခွင့်လွတ်နားလည်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်မယ်၊ ကိုယ့်ကိုအတင်းအကြပ် မလုပ်ဘူး၊ ကိုယ့်ကို သိမြင်မယ်၊ အဓိက,က ကိုယ့်ကိုအောင်နိုင်ဖို့၊ မှန်မှန်ကန်ကုန် အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါမှ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိမယ်။
ကိုယ့်ကိုစိတ်တို၊ ဒေါသထွက်အောင် လုပ်တဲ့လူက အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပြီ၊ ကိုယ်က နေရာမှာရပ်ပြီး သူ့ကို ဒေါသထွက်နေတုန်း...
"စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာ တစ်ခြားလူရဲ့အမှားနဲ့ ကိုယ့်ကိုအပြစ်ပေးနေတာပါ" တဲ့။ တစ်ခြားရှုထောင့်ကနေ ကိုယ့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင် "ပင်ပန်းတယ်၊ မောတယ်၊ ပျော်တယ်၊ ဇိမ်ကျတယ်" ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲကနေဖြစ်လာတဲ့ စိတ်အခြေအနေ(mood)ပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေက လူ၊ အရာဝတ္တုအပေါ်ထားမယ့် ကိုယ့်သဘောထား၊ စိတ်ခံစားချက်တွေကို အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်။
အဘွားအိုတစ်ဦးမှာ သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ သမီးကြီးက ထီးရောင်းသူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး သမီးငယ်က အထည်ဆေးဆိုးတဲ့အလုပ် လုပ်တယ်။ ဒီအတွက် အဘွားအို မပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူး။ အကြောင်းက နေသာရင် သမီးကြီးရဲ့ ထီးတွေရောင်းမထွက်မှာစိုးပြီး မိုးရွာခဲ့ရင် သမီးငယ်ရဲ့ ဆေးဆိုးထည်တွေ မခြောက်မှာ တွေးပူနေခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဘွားအိုဟာ နေသာလည်းစိတ်ညစ်၊ မိုးရွာလည်း စိတ်ညစ်ခဲ့ရတယ်။ မကြာပါဘူး.. အဲဒီစိတ်နဲ့ အဘွားအိုရဲ့ဆံပင်တွေ လိုတာထက် ပိုဖြူပြီးအိုစာသွားခဲ့ရတယ်။
တစ်နေ့မှာ အဝေးကမိတ်ဆွေတစ်ဦး ရောက်လာခဲ့တယ်။ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အိုစာသွားတဲ့အဘွားအိုကို ကြည့်ပြီး မိတ်ဆွေက တအံ့တသြမေးမိတယ်။ အဘွားအိုက သူခံစားနေရတဲ့သောကကို ပြောပြလိုက်တယ်။ မိတ်ဆွေက ရယ်ပြီး "မိုးရွာရင် သမီးကြီးရဲ့ထီးရောင်းရမယ်၊ နေသာရင် သမီးငယ်ရဲ့ ဆေးဆိုးထည်တွေ ခြောက်မယ်။ ဒီလိုအတွေးက ကိုယ့်ကို နေ့တိုင်းပျော်ရွှင်စေတာပဲ မဟုတ်လား? နေ့တစ်နေ့တိုင်းက ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ ဒါကိုဝမ်းမသာဘဲ ဘာဖြစ်လို့ သောကတွေ ခံစားနေရသလဲ?" လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဘွားအိုလည်း ကိုယ့်အတွေးကို တစ်ခြားရှုထောင့်ကနေ တွေးကြည့်ခံစားပြီး နေ့တိုင်း ပြုံးရယ်နိုင်ခဲ့တော့တယ်။
လူ့ဘဝလမ်းတစ်လျှောက်က အဆင်ပြေချောမွေ့တာချည်းပဲ မဟုတ်ဘူး။ ခလုတ်တိုက်ချော်လဲတဲ့ အချိန်လည်းရှိမယ်။ စိတ်တိုဒေါသထွက်တဲ့ အချိန်လည်းရှိမယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတဲ့အခါလည်းရှိမယ်။
ဒဿနိက ပညာရှင်တစ်ဦးက ဒီလိုဆိုထားပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထိခိုက်နာကျင်မှုကို ပြဿနာ၊ ကိစ္စရပ်တွေက သယ်ဆောင်လာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ပြဿနာ ကိစ္စရပ်တွေအပေါ် ကိုယ်မြင်တဲ့အမြင်ကနေ ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်"
တစ်ခြားရှုထောင့်ကနေ ကိုယ့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင် ဘဝကိုသက်တောင့်သက်သာ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်၊ ဘဝကို သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်၊ ပူဆွေးသောကတွေကို အောင်နိုင်မယ့် သင်ခန်းစာမျိုး၊ အောင်မြင်မှုမျိုးကို ရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ လူ့ဘဝရဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ တစ်ခြားလူရဲ့အမှားနဲ့ ကိုယ့်ကိုစိတ်တို၊ ဒေါသထွက်အောင် အပြစ်တင်မိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
မူရင်း- google search or 愿您天天是好
Posted by my blog at 12:25 PM0comments
Buddhist Sites Access To Insight American Buddhist Australia Buddhism Bhavana Society Birmingham Vihara Buddha Mind Cologne Buddhists BuddhaNet Buddhism in France Buddhism in Switzerland New South Wales Australia Cambodia Dhamma Download Dhamma Net Dhamma Study Diamon Gautama Buddha Germany Buddhist Houston Buddhist London Vihara Metta Net New York Nibbana The Buddhist Society Vipassana Washington Vihara What the Buddha Taught Buddhist publication society Buddhist Publishing Group Bibliography of Children's Buddhist Literature Snow Lion Publications Rangiung Yeshe Publications Wisdom Publications Shambala's Publications Windhorse books Buddhist Text Translation Society Bodhi Publishing Dharma Publishing Parallax Press Mandala books Pali Text Society The Buddhist Society Uk Tharpa Publications Budda's books Service Buddha's Light Publishing Adyar Publications Wydanictwo "A"(plish> Mind and Cafe Ediciones Dharma(Spanish) Chinese Buddhist Electronic Text Association for Insight Meditation E-Buddhism Dharma Net International The Pali Text Society Research Articles In Buddhism The Buddhist Society Buddhist Digital Library The Buddha:A Short Blography Buddha Net Basic Buddhism Guide Buddhist Ceremonies Buddhist Websites from around the World Buddhism Buddhist Studies WWW Virtual Library Pure Land Buddhism WWW virtual Library Buddhism Internet Resources Dalai Lama: Ocean of Wisdom The Dalai Lama's Biography PageLoc E-Glossary of Buddhhism An exclusive interview The Private Dalai Lama The Most Famous Buddhist in the world Tibetan Buddhism Buddhism in Tibetan An Introduction to Buddhism The Face of Buddhism Family Tree-Buddhist Deities in Japan Hands (mudra) Schools of Buddhism Zen Buddhism WWW virtual Library Wheel Publications Society-Kandy Uddhamusmrti
အင်္ဂလိပ် မြန်မာ အဘိဓာန်
၈ လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်
သမအသင်း စာရင်းရှင်း (ကာတွန်း ရာဇာ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ ၈-၆-၇၄)
ခရီးတစ်ခု အဆုံးသတ်ခြင်း (သို့) ခရီးတစ်ခု စတင်ခြင်း။
လောကဓံတရား (၈) ပါးနဲ့ ကျမ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ (လွတ်မြောက်နယ်မြေ ) ၈လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီး ၂၁နှစ်ပြည့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။...။
ABSDF ရဲမေ နှစ်ဦး၏ ကဗျာနှစ်ပုဒ်
သူရဲကောင်း မင်းကိုနိုင် ရဲ့ တော်လှန်ရေးသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်
ဒါ ... တို့ ဗမာ ကွ
ရုရှားပြန် စစ်တပ်အရာရှိသုံးဦး ပြည်ပကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်
Visak , why is it so called?